उपत्यकाबासीलाई ढल मिसिएको पानी, के हेर्दैछ केयुकेएल ? – रिपोर्टर्स नेपाल
२०७६ श्रावण ४ शनिबार, ०९:३८
उपत्यकाबासीलाई ढल मिसिएको पानी, के हेर्दैछ केयुकेएल ?
२०७५ माघ २० गते प्रकाशित, l २१:३३
माघ २०, काठमाण्डौ । काठमाण्डौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले राजधानीमा वितरण गर्दै आएको खानेपानीमा ढल मिसिने गरेको छ । एकातिर पर्याप्त खानेपानी वितरण हुन सकेको छैन भने भएको पानी पनि अशुद्ध छ । तर सम्बन्धित निकाय भने कानमा तेल हालेर बसेको छ ।
उपत्यकामा दिनानुदिन बढ्दै गएको बस्तीका कारण पानीका स्रोतहरु कम हुदैं गएका छन् । त्यसैलाई ध्यानमा राखी काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड केयुकेएलले उपत्यकाबासीको तिर्खा मेटाउन राजधानीमा खानेपानी वितरण गर्दै आएको छ ।
तर केयूकेएलले राजधानीमा वितरण गरेको खानेपानीमा वर्षेनि राजधानीका कुनै न कुनै स्थानमा ढलको मिसावट भएको भेटिन्छ । केयूकेएलले आपूर्ति गर्दै आएको मैतिदेवी, घट्टेकुलो, सामाखुसी, गोंगबु, माछापोखरी, नयाँबजार, महाराजगन्ज, बसुन्धरालगायतका अधिकांश ठाउँमा खानेपानीमा ढल मिसिएर आउन थालेपछि उपभोक्ताहरु गुनासो लिएर सम्बन्धीत निकायमा पुग्नेको संख्यामा बृद्धि भएको छ ।
काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका उप प्रवन्धक प्रकाश कुमार राईका अनुसार उपत्यकाका खानेपानीको वितरण प्रणालीमा नै समस्या भएको छ । पुरानो खानेपानी वितरण प्रणाली, खानेपानीको पाइप र ढलको पाइप एकै ठाउँबाट विछ्याइने हुनाले यस्तो समस्या पटक पटक दोहोरिएको केयुकेएलको स्विकारोक्ति छ ।
खानेपानीमा ढल मिसिएको स्विकार गर्ने निकाय समस्या समाधानका लागि भने केही पनि गर्न सकेको छैन । उपभोक्ताको गुनासोलाई केयुकेएलले वेवास्ता गरेको छ । स्वस्थ्य र शुद्ध खानेपानी वितरणका लागि आफूहरु सक्रिय भएर लागिपरेको उपप्रबन्धक राईको दावी छ । तर समस्या भने जहाँको त्यहीँ छ ।
खानेपानी लिमिटेडले उपत्यकामा दैनिक करिब १३ करोड लिटर पानी वितरण गर्दै आइरहेको छ । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) को चरम लापर्बाहीका कारण खानेपानीमा ढल आउन थालेको हो । यसतर्फ सम्बन्धीत निकायले बेलैमा नसोचे उपत्यकाबासीको स्वास्थ्यमा जोखिम बढ्न सक्छ ।
‘खानेपानीको समस्या चाँडै हल हुन्छ’
पटक पटक म्याद थप्दा पनि खानेपानी आयोजना अधुरै